Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo magacowday mas'uuliyiin cusub
MUQDISHO, Soomaaliya – Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa Khamiista maanta ah magacaabay Agaasimaha Hay'adda Tirokoobka Qaranka iyo ku xigeenkiisa. Hay'addan waxaa dhowaan lagu aas-aasay xeer madaxweyne.
Sharma'ake Faarax ayaa waxaa loo xushay agaasimaha guud ee Hay'adda, halka C/raxmaan Cumar Daahir laga dhigay ku xigeenkiisa.
Agaasimaha cusub ayaa ahaa lataliyaha arrimaha dhaqaalaha ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, sidda lagu sheegay qoraal lagu faafiyey luuqadda English-ka oo kasoo baxay xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumada.
Sidoo kale, wuxuu ahaa isuduwaha barnaamijka Qorsheynta Dhaqaalaha Qaranka. Kahor, wuxuu door khabiirnimo dhanka farsamada uu kula oo shaqeeyay UN, World Bank, DfID, USAID, iyo hay'addo kale oo maxali ah.
Intaas waxaa wehlisa wuxuu muddo todoba sano lasoo shaqeeyay Hay'adda UNICEF xafiisyadeeda Soomaaliya, New York, iyo Kuuriyada Waqooyi.
Sidda laga soo xigtay bayaanka, waajibaadka hay'adda cusub oo yeelan doonto guddi fulin waa dejinta shuruucda iyo baaritaanka tirokoobka dalka.
Magacaabidaan ayaa kusoo aadeysa xilli muddo xileedka dowladda haatan talada haysa uu gabaabsi yahay isla markaana aan wali lagu heshiin nooca iyo qaabka loo marayo doorashooyinka soo aadan ee sanadka 2020-21.
Siyaasiyiinta oo ka digay muddo kororsi ay sameysato xukuumadda ayaa rumeysan in wadanka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah, iyagoo cuskanaya "amni darro baahsan diyaar-garow la'aan dowladda dhinaceeda ah".
Shirkadda DP World ayaa waxba kama jiraan kasoo qaadey go'aankii dowladda Soomaaliya...
Xog ku saabsan wadahadalo hoose oo ka socda Madaxtooyada Soomaaliya
Soomaliya 26.05.2020. 19:00
Dhimashada iyo kiisaska Covid-19 ee Soomaaliya oo mar kale korortay
Somaliland 24.05.2020. 11:48
Mas'uul ka tirsan garoonka Aadan Cadde oo shaqada laga eryay [Sabab]
Soomaliya 03.10.2018. 14:14
Muxuu kulanka BF ee furmaya uga dhigan yahay siyaasada kala-guurka?
Soomaliya 15.05.2020. 18:00
Dableydii fulisay dilkii Haacaaluu Hundeessaa oo la aqoonsaday 10.07.2020. 19:35